Retrစတြေးလျနိုင်ငံပြန်လည်ထုတ်ယူသူများ - Breeds
သင်အကြိုက်ဆုံးလူစွမ်းကောင်းနှစ်ခုကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ယခုသူတို့ဖန်တီးရန်သူတို့၏စွမ်းအားများကိုပေါင်းစပ်သည်ဟုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ အန္တိမ စူပါဟီးရိုး။
ဒါကနှင့်အတူဖြစ်ပျက်တော်တော်များများပါပဲ Australian Retriever လည်းအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်များဖြင့်လူသိများ ရွှေသြစတြေးလျ , သြစတြေးလျရွှေပြန်လည်ရယူ , သြစတြေးလျသိုးထိန်းပြန်လည်ရယူသူ နှင့် ရွှေသြစတြေးလျသိုးထိန်း ။
Golden Retriever & Australian Shepherd ရောစပ်ပါ
ဤ furry crossbreed သည်စွမ်းအင်ပြည့်ဝသောပါရမီတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်အားအကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းများဖြင့်သင်၏ခြေချောင်းများပေါ်တွင်စောင့်ရှောက်လိမ့်မည်။ ပိုမိုသိရှိရန်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
Golden Aussie ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ။
အဘယ်အရာကို Aussie Retriever ရဲ့စိတ်ထားကနေမျှော်လင့်ထား?
ရောင်းရန်Sheစတြေးလျသိုးထိန်း Retriever ခွေးကလေးရှာခြင်း
ဒီမျိုးစပ် doggo ကိုဖန်တီးရန်သြစတြေးလျမျိုးဆက်တစ်ခုတွင်တာဝန်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ သီအိုရီအရမျိုးပွားသူသည်သူမ၏အနက်ရောင်သြစတြေးလျသိုးထိန်းကို ၂၀၀၇ နှင့် ၂၀၀၈ တွင်သူမ၏ရွှေပြန်လည်ရယူသူများနှင့်ဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်။
ထို အချိန်မှစ၍ ဤအဖွဲ့အစည်းများကဤကြက်တူရွေးမျိုးကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ အမေရိကန်ခွေးတစ်ကောင် Hybrid ကလပ် (ACHC) ဒီဇိုင်နာ Dogs ခွေးဂေဟာကလပ် (DDKC), အမေရိက၏ခွေး Registry (DRA) နှင့် နိုင်ငံတကာဒီဇိုင်နာ Canine မှတ်ပုံတင် (IDCR) ။
သူတို့ရဲ့နာမ၌ဒေသခံပေမယ့်ခေတ်သစ် သြစတြေးလျသိုးထိန်းများ အောက်မှာ Land ကနေလာကြဘူး။
သူတို့၏မကြာသေးမီကဘိုးဘေးများသည်ဥရောပနိုင်ငံရှိ Basque နိုင်ငံမှဆင်းသက်လာခဲ့သော်လည်းယူအက်စ်တွင်လူသိများလာသည်။
နွားမွေးမြူရန်, သြစတြေးလျ ဖြစ်ကြသည် အမာခံဖို့ခွေးအလုပ်လုပ် ။
သူတို့အဘို့အလူသိများ အလုပ်ကျင့်ဝတ် နှင့် ဉာဏ်ရည် , သြစတြေးလျသိုးထိန်းသည်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ကယ်ဆယ်ခြင်းမှကုထုံးအထိအမျိုးမျိုးသောခွေးတစ်ကောင်အလုပ်အတွက် shoo-in တစ်ခုဖြစ်သည်။
Golden Retrievers, အမေရိကားရဲ့အချစ်ဆုံးဝတ်ရည်တစ်ခုဖြစ်သည်
ရေငှက်ပြန်ဆွဲယူရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, ရွှေ retrievers (သို့မဟုတ် Goldens တိုတိုအဘို့) အခြားဆက်ကပ်အပ်နှံဖောက်ဖြစ်ကြသည်။
၁၈၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်းတွင်ရွှေပြန်လည်ရယူသည့်အတွက်စကော့တလန်မှ Dudley Marjoribanks ကိုကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်နိုင်သည်။
အနက်ရောင် retrievers များထဲမှအဝါရောင်ခွေးပေါက်စတစ်ကောင်ထွက်လာသည်။ Marjoribanks ယခုမျိုးသုဉ်းအတူ pup ကူး Tweed ရေ Spaniel ။ သူတို့ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ဒီနေ့ရွှေ Retriever မှလမ်းကိုပေး၏။
နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာ Golden Retrievers ဖြစ်လာတယ် အချစ်ဆုံးမိသားစုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ။ သူတို့ကတသမတ်တည်းအတွက်အဆင့် ထိပ်ဆုံး ၅ AKC ၏ 'လူကြိုက်အများဆုံးမျိုးပွား' ၏ စာရင်း ။
Sheစတြေးလျသိုးထိန်း - ရွှေပြန်လည်ရယူသည့်လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့် ပတ်သက်၍ အအေးဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုမှာခွေးနှစ်ကောင်မျှမတူပါ။ သငျသညျခွေးကလေးများတူညီသောအမှိုက်သရိုက်များထံမှဝယ်နိုင်ပြီး, တစ် ဦး ချင်းစီထူးခြားတဲ့ပွဲနှင့်အတူအဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။
Aussie Retrievers များရှိသည် အားကစား, ကောင်းစွာ - အချိုးကျဘောင် ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုချေး။
၏အရိပ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းနွေးမျက်စိနှင့်အတူ အပြာသို့မဟုတ်အညိုရောင် သင်၏သြစတြေးလျ retriever ရောနှောမှုသည်အံ့အားသင့်စရာကောင်းသည်။ သူတို့၏နားများသည်သူတို့၏ကျယ်ပြန့်သောခေါင်း၏တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ကျဆင်းသွားပြီးသူတို့၏ပတ်ပတ်လည်အနက်ရောင်နှာခေါင်းများသည်ပုံပေါ်ရှိချယ်ရီဖြစ်သည်။
Aussie Retrievers ရေပါ ၀ င်သောနှစ်ဆအင်္ကျီသည်ပေါင်းစပ်နိုင်ပါသည် အဖြူ၊ အနက်ရောင်၊ အညိုရောင်၊ အရောင်များ။ သူတို့ကအစဝိသေသရှိသည်နိုင်ဘူး အနီရောင်သို့မဟုတ်အပြာ merle သြစတြေးလျသိုးထိန်း၏။
သူတို့၏သားမွေးများသည်အလတ်စားသို့မဟုတ်ရှည်လျားနိုင်သည်၊ အနည်းငယ်မျှထူ။ သို့မဟုတ်ဖြောင့်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ကြမ်းတမ်းသော texture ရှိသည်။
သင်၏ရွှေသြစတြေးလျသိုးထိန်းသည်ထိုအခြင်းအရာနှင့်အဆုံးသတ်လိမ့်မည် ရှည်လျား fluffy အမြီး ရွှေ Retriever ၏။ ဤသည်သော်လည်းအစဉ်အမြဲအမှုမဟုတ်ပါဘူး။
အချို့သောစင်ကြယ်သော Aussies များသည်အမြီးရှိသောအမြီးများဖြင့်မွေးဖွားလာကြသည်။ သင့်ကလေးရဲ့မိဘတွေပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့မှာအမြီးအပြည့်ရှိနိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အရမ်းတိုလို့သူတို့မှာတစ်ခုလုံးမရှိဘူးလို့ထင်ရတယ်။
သူတို့၏မိဘမျိုးဆက်များတိုးတက်မှုဇယားများအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏ Aussie Golden သည်သူတို့၏အရွယ်အစားအပြည့်ကိုရောက်ရှိသင့်သည် အသက် 12 မှ 16 လ ။ အရွယ်ရောက်သူများအများအားဖြင့်အကြားအလေးချိန်ပါလိမ့်မယ် 30 မှ 60 ပေါင် (14 မှ 27 ကီလိုဂရမ်) နှင့်ရပ်တယ် 19 မှ 23 လက်မ (၄၈ မှ ၅၈ စင်တီမီတာ) ရှည်သည်။
ရင်ခွင်အရွယ်အစားနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာတစ်ခုခုကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား မိဘတစ် ဦး (သို့) နှစ် ဦး စလုံးပါ ၀ င်ပါကအသေးစားရွှေသြစတြေးလျသည်ဖြစ်နိုင်သည် သေးသေးလေးအမေရိကန်သိုးထိန်း နှင့် သေးသေးလေးရွှေ retriever ။
သြစတြေးလျ retriever ၏ကွဲပြားမှုသည်အထူးသဖြင့်ကြီးမားသော်လည်း၊ တိုက်ခန်းလူနေမှုအတှကျအဓိပ်ပာယျ ။ ဤခွေးငယ်များသည်သူတို့၏ခြံစည်းရိုးများဖြင့်ကြီးမားသောခြံစည်းရိုးများရှိသောအိမ်များတွင်ရှင်သန်နေထိုင်ကြသည်။
ဒီဖီဒိုက တက်ကြွသောမိသားစုများအတွက်အံ့သြဖွယ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ။ သူတို့ဟာအသက်အရွယ်မရွေးကလေးငယ်တွေနဲ့အဆင်ပြေချောမွေ့ပြီးသူတို့ရဲ့အိတ်ထဲကလူတိုင်းနဲ့ရင်းနှီးတဲ့နှောင်ကြိုးတွေဖွဲ့ထားတယ်။
အိမ်နှင့်အိမ်နောက်ဖေးတွင်ကစားရသည့်အချိန်၌ပျော်စရာကောင်းသော fluffy merle ခွေးပေါက်လေး၏ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။
သူတို့ဟာတိုတောင်းတဲ့ကာလများအတွက်တစ် ဦး တည်းဖြစ်ခြင်းသည်းခံနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် သူတို့မကြာခဏအပြန်အလှန်နှင့်ဆွလိုအပ်ပါတယ် ။ ဤအရာများမရှိလျှင်ရွှေသြစတြေးလျသိုးထိန်းများသည်မငြိမ်မသက်မှုများနှင့်ခွဲခြားသည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရန်အဖျက်အကျင့်များသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ဒီပေါင်းစပ် အသကျရှငျသို့မဟုတ်အပြင်ဘက်အိပ်သင့်ပါဘူး ။
အိုးချိုစေရန်, Aussies ဖြစ်ကြသည် ဖော်ရွေ doggos သူစိမ်းတွေနဲ့တောင်မှ။ အကယ်၍ သင်သည် hosting နှင့်ဖျော်ဖြေမှုကိုနှစ်သက်ပါကသင့် your ည့်သည်များအားခြောက်လှန့်ရန်သင်၏သြစတြေးလျ Shepherd-Golden Retriever အရောအနှောအတွက်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။
သူတို့ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သော Aussie Shepherd Retrievers များသည်aနယ်မြေ Streak ။ သူတို့အကြိုက်ဆုံးလူကိုအကာအကွယ်ယူနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်အိမ်ပတ်လည်ရှိချစ်မြတ်နိုးသောပစ္စည်းများကိုသူတို့ခိုင်းနိုင်သည်။
ကစားချိန်အတွင်းကစားစရာများပါ ၀ င်ပါကကလေးများနှင့်အခြားအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကိုစောင့်ကြည့်ပါ။ သင်၏ရွှေသြစတြေးလျသည်သူတို့ဝေမျှရန်ငြီးငွေ့နေသည်ဟုဆုံးဖြတ်ကောင်းဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
စတြေးလျ စောင့်ကြည့်ရေးအရည်အသွေးတွေကိုပိုင်ဆိုင် လည်း။ သူတို့သည်ယေဘူယျအားဖြင့်ဟောင်ခြင်းမရှိသော်လည်းသင့်အားအလားအလာရှိသောခြိမ်းခြောက်မှုများမှကာကွယ်ရန်ဆန္ဒရှိသည်။
သူတို့ရဲ့သြစတြေးလျဘက်ကသူတို့ကိုလုပ်တယ် အစွမ်းသတ္တိ , ဒါကြောင့်ကလေးငယ်များနှင့်ကြောင်သတိပြုပါ! ထိုထိန်းကျောင်းသည့်မျိုးရိုးဗီဇသည်မည်မျှခိုင်ခံ့သည်အပေါ်တွင် မူတည်၍ သင်၏အသေးငယ်ဆုံးအထုပ်အဖွဲ့ဝင်များကိုရံဖန်ရံခါ Corralled တွေ့နိုင်သည်။
အစဉ်အဆက်ကိုချွတ်ဝတ်ဆင်မည်မဟုတ်သောအရာတစ်ခုမှာသင်၏သြစတေးရွှေရဲ့ဖြစ်ပါတယ် rambunctious ဝိညာဉျကို ။ သူတို့ အချစ် စွန့်ပစ်နှင့်အတူဘဝကစား, ဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်ရန်။ သင့်ကလေးကကြီးလာနိုင်တယ်၊ သူတို့ရဲ့ခွေးပေါက်စကဲ့သို့သောရွှင်လန်းမှုမပျောက်စေနှင့် ။
Meeti Loki၊ Golden Retriever-Australian Shepherd ရောစပ်ခြင်း - ပုံရိပ်ရင်း
သြစတေးလျနှင့်ရွှေဒင်းသည်ခွေးတစ်ကောင်ကမ္ဘာ၏အသိဉာဏ်အရှိဆုံးမျိုးစိတ်နှစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏သြစတြေးလျ retriever သည် မြန်မြန်သင်ယူသူ ။ သူတို့ကလေ့ကျင့်ရေးကိုနှစ်သက်တယ်၊ ဒါကပြproblemနာရဲ့အပြုအမူတွေကိုအစကတည်းကဖယ်ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်။
အဖြစ်မကြာမီသင့်ရဲ့ pup သင်နှင့်အတူအိမ်ပြန်လာအဖြစ် မျှော်လင့်ချက်များစတင်ပါ။ သငျသညျမစတင်မှီပင်မသင့်လျော်သောတိရစ္ဆာန်များသို့မဟုတ်နယ်မြေစရိုက်များကိုကာကွယ်ချင်တယ်။
သင်၏သြစတြေးလျသိုးထိန်း - ရွှေပြန်လည်ရယူသည့်အရောအနှောကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးပါက၎င်းတို့ကိုနာခံမှုအတန်းများနှင့်ခွေးပေါက်စကလေးများနေ့တွင်စတင်ခေါ်ယူပါ။
လူမှုရေးနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းသည်သူတို့၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးတွင်အပြုအမူလေ့ကျင့်မှုနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းကသူတို့ကိုမည်သို့သင်ရမည်ကိုသင်ပေးလိမ့်မည် သင့်လျော်သောအခြားခွေးနှင့်လူတို့နှင့်အတူအပြန်အလှန် ။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားပိုင်ဆိုင်မှုများလွန်းခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည် သူတို့ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်။ ဒါ့အပြင်ဒါကကူညီလိမ့်မယ် ကြောက်စိတ်ကင်းမဲ့သောခေါင်းဆောင်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်၏နေရာကိုခိုင်မာအောင်ထားပါ ။
သူတို့ကသစ်ကိုလှည့်ကွက်အဘို့လည်းဟောင်းဖြစ်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ Plus အား, ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်အရေးပါသည် ဒီ crossbreed ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရန်။ လေ့ကျင့်ရေးကိုသင်၏ခွေးနှင့်စည်းနှောင်ရန်နှင့် ၄ င်း၏လိုအပ်ချက်များကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်အချိန်အဖြစ်အသုံးပြုပါ။
ကျေးဇူးတင်စရာကသြစတြေးလျသိုးထိန်း - ရွှေပြန်လည်ရယူသည့်အရောအနှောကိုဂရုစိုက်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်၏ pooch ကိုကျန်းမာသန်စွမ်းစေရန်အတွက်သင်ဘာလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုကြည့်ရန်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
ဟုတ်တယ်။ နှင့်အဖြစ် မိုးသည်းထန်စွာသွန်းလောင်းရန်အလယ်အလတ် တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ဆေးကြောခြင်းသည်များသောအားဖြင့်လုံလောက်သည်။ သွန်းလောင်းမှုကိုလျှော့ချရန်သူတို့ကိုအမြဲတမ်းမကြာခဏဆေးကြောနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီခွေးကိုသင်ဘယ်တော့မှမရိတ်သင့်ဘူး။
အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့ဒီအင်္ကျီနှစ်ထည်ကိုသတိရကြလား။ ဤဒုတိယဆံပင်သည်သင်၏ Golden Aussie ခွေးအားဒြပ်စင်များမှကာကွယ်ပေးပြီးသူမ၏ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိန်းညှိပေးသည်။
ထိုအင်္ကျီနှစ်ထည်ကိုထိပ်တန်းအခြေအနေတွင်ထားရှိခြင်းဖြင့်သင်၏ Golden Aussie ကိုသေချာစေသည် ရှားပါးရေချိုးရန်လိုအပ်သည် ။
သငျသညျပြီးသားညစ်ပတ်ခွေးကိုဆံပင်၏အတွေးမှာတွားသွားနေတယ်ဆိုရင်, စိတ်မပူပါနဲ့။ သင်၏ခွေးကလေးသည်အိမ်ပြင်ကိုယူလာပါက၊ ဖြီး ဒါမှမဟုတ် စိုစွတ်သောသုတ် သူတို့ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့။ အကယ်၍ သူတို့သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ညစ်ပတ်။ ရာသီဥတုခွင့်ပြုချက်ဖြစ်ပါကအပြင်ဘက်သို့သူတို့ကိုပိတ်ထားပါ။ ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုမသုံးပါနှင့်။
ကျန်တဲ့ Goldenစတြေးလျရွှေပြန်လည်ထုတ်ယူသူ၏အလှတရားလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သည်အချိန်ကုန်သက်သာသည် ။ တစ်ရက်သို့မဟုတ်တစ်ကြိမ်သင်ထိုကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသော fuzzy ကိုစစ်ဆေးချင်လိမ့်မည် နားရွက် ပိုးမွှားသို့မဟုတ်အပျက်အစီးလက္ခဏာများသည်။
နေ့စဉ်သူမ၏သွားများကို brush ဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့် ချုံ့ အခြားအပတ်တိုင်းသူမ၏လက်သည်း
Aussie Retriever အတွက်အကောင်းဆုံးခွေးစာကဘာလဲ။
လုံလောက်သောအာဟာရသည်ခွေးနှင့်တစ်ကောင်ကွဲပြားသည်။ Active ခွေးတစ်ကောင်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အစားအစာများတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ပရိုတိန်းမြင့်မား နှင့်ဤ crossbreed မခြွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။aရွေးပါ အရည်အသွေးမြင့်ခြောက်သွေ့သော kibble လုံ့လရှိသူဖြစ်ကြောင်းအလယ်အလတ်မှအကြီးစားကြီးကြပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အသက်၊ အလေးချိန်နှင့်ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များအတွက်လည်းသင့်တော်ပါသည်။
နေ့စဉ် ၂-၃ ခွက်ခန့်အစားအစာများ မင်းရဲ့ pooch ကိုလောင်ကျွမ်းစေလိမ့်မယ်။ ဖောင်းပွခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သည့်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းစသောအန္တရာယ်များကိုလျှော့ချနိုင်ရန်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်အစာကျွေးခြင်းကိုရှောင်ပါ။
ကြံ့ခိုင်ရေးဝါသနာရှင်များ, ဒီရုံသင်တို့အဘို့အခွေးဖြစ်နိုင်သည်။ Golden Aussie သိုးထိန်းများမှာ အလွန်လုံ့လရှိသူ နှင့်လိုအပ် တစ်နေ့လေ့ကျင့်ခန်းအနည်းဆုံးမိနစ် ၆၀ ။
ဤလေ့ကျင့်ခန်းပမာဏကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုသည် မဟုတ်ညှိနှိုင်း ။
သငျသညျနေ့တိုင်း cardio တစ် ဦး မပြတ်မတောက်နာရီအဘို့ပြင်ဆင်နေလျှင်သေချာလား အများလက်ခံသောလွဲမှားသောအယူအဆမှာဤလုပ်ဆောင်မှုသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ဖြစ်ပျက်ရန်လိုအပ်သည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ င်း ဖြန့်ဖို့ပိုကောင်း တစ်နေ့တာတစ်လျှောက်လုံးသင့်ရဲ့ doggo ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်း။ ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ပါ၊ Fido ရဲ့အဆစ်များနှင့်ကြွက်သားများကသင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။
သူတို့အားလိုင်းများတလျှောက်တွင်, သင့် pup ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်း regimen ပန်းခြံမှတဆင့်လမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်ပြေးထက်ပိုမိုပါဝင်သင့်ပါတယ်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ သို့သော်သြစတြေးလျပြန်လည်ထူထောင်သူများသည်သူတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည့်အခါပွင့်လန်းလာသည်။ သူတို့၏ ဦး နှောက်ကိုပျော်ရွှင်စေရန်အလယ်အလတ်လမ်းလျှောက်မှုများကိုကစားခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းသင်တန်းများနှင့်ရောစပ်ပါ။
အမှုအရာထမွှေးကြိုင်ရန်အခမဲ့ခံစားရသည် ။ သူတို့ပါပဲ ပူသို့မဟုတ်အအေးရာသီဥတုမှအထိခိုက်မခံ ဖြစ်စေ။ အဲဒါကမင်းအတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ရွေးချယ်စရာများစွာ!
သူတို့ဟာကျယ်ပြန့်တဲ့နေရာတွေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြေးရတာ၊ ကမ်းခြေမှာလှိုင်းတွေကိုလိုက်ဖမ်းတာတောင်တောင်တက်တာကိုနှစ်သက်တယ်။ သင်ဤခွေးတစ်ကောင်ကိုမေးလျှင်အဘယ်သူမျှမတောင်ကြီး, မြင့်လွန်းသည်။
သို့သော်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များသည်ကွင်းဆင်းလေ့လာရန်မလိုပါ။ သင်၏ Golden Aussie Shepherd ၏ပြန်လည်ထုတ်ယူသည့်ဘက်သို့ထိပုတ်ပါ၊ သင်တစ် ဦး ရောက်နေကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ အပြည့်အဝ - ခြံစည်းရိုးareaရိယာ သူတို့ကို Off-leash ကစားခွင့်မပြုမီ။
သြစတြေးလျ retriever တစ် ဦး ရနံ့ဖမ်းမိပြီးတာနဲ့သူတို့ခညျြနှောငျနှင့်ကလိုက်နာရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပါတယ်။ သူတို့၏ပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်စွမ်းကိုပုံမှန်လေ့ကျင့်ပါ၊ ရှည်လျားသောခဲ သူတို့ခြေထောက်တွေကိုဆန့်ထုတ်လို့ရတယ်။
မျိုးပွားများကဲ့သို့ပင် Aussie Golden Retrievers သည်အချို့သောကျန်းမာရေးအခြေအနေများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
Golden Aussies နဲ့အတူမင်းရဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်ချင်တယ် မျက်စိပြproblemsနာများ ကြိုက်တယ် မျက်စိအတွင်းတိမ် နှင့် colobomas ။ လည်းရှိပါတယ် မလှုပ်ရှားသောသိုင်းရွိုက်၊ ဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ နှင့် တင်ပါးဆုံရိုး dysplasia ။
သင်၏သြစတြေးလျပြန်လည်ထုတ်ယူသူသည်သားဖွားသီးသန့်ကျန်းမာရေးပြissuesနာများကိုလည်းအမွေဆက်ခံနိုင်သည်။ Golden Retrievers သည်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းအတွက်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသည် Multidrug အထိခိုက်မခံ သြစတြေးလျသိုးထိန်းများတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာပင် Aussie Goldens သည်အချို့သောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်များနှင့်အတူအသက်ရှည်စွာနေထိုင်သည်။ ပုံမှန် vet လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောဂရုစိုက်မှုတို့ဖြင့်သြစတြေးလျနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်သူများသည်သက်တမ်းများစွာရှိသည် 12 မှ 15 နှစ် ။
Australian Shepherd Retriever ခွေးကလေး - ပုံရိပ်ရင်း
သြစတြေးလျ retrievers သည်အခြားဒီဇိုင်နာမျိုးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်လေးတတ်နိုင်သည်။ ဒီခွေးတွေအတွက်စျေးနှုန်းကနေအထိ $ 300 မှ $ 900 ။
ဤစပ်သည်အသစ်နှင့်ရှားပါးဆဲဖြစ်သဖြင့်သြစတြေးလျသိုးထိန်း - ရွှေပြန်လည်ရယူသည့်အရောအနှောများကိုသီးသန့်မွေးမြူသောမျိုးပွားသူသို့မဟုတ် kennel ကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။
Goldenစတြေးလျရွှေ retriever မျိုးဆက်များ & kennels
၎င်းတို့တွင်သင့်ကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်သောအခြားသြစတြေးလျသိုးထိန်းလက်ဝါးကပ်တိုင်များနှင့် Golden Retriever ရောနှောမှုများလည်းရှိသည်။ ဤနေရာတွင်စစ်ဆေးရန်နေရာအနည်းငယ်ရှိသည်။
သြစတြေးလျသိုးထိန်း Furever (Rancho Cucamonga, CA)
အနောက်တိုင်းသြစတြေးလျသိုးထိန်းကယ်ဆယ်ရေး (Sheridan, WY)
ဝဲချိုင့်ရွှေပြန်လည်ရယူသည့်ကယ်ဆယ်ရေး (Reinholds, PA)
Neuse River Golden Retriever ကယ်ဆယ်ရေး (Raleigh, NC)
ငါတို့လည်းတစ် ဦး တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ သြစတြေးလျ retrievers ကိုရည်စူးပြီး၊ အဲဒါကိုကြည့်ရှုခြင်းဟာကျေနပ်ပါတယ်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ Daisy, Aussie Golden mix ခွေးကလေး - ပုံရိပ်ရင်း
သင်ဤဖောက်သည်ကိုဒဏ်ခတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မပြုသည်ဖြစ်စေ Aussie Goldens တွင်ကမ်းလှမ်းရန်များစွာရှိသည်။
သူတို့ သူတို့ရဲ့မိသားစုကိုချစ် သူတို့သည်ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်ပြီးသင်ယူရန်ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ သူတို့ကအစလေ့ကျင့်ခန်းကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြသည် တက်ကြွသောပိုင်ရှင်များလိုအပ်သည် လုံ့လနှင့်အတူ။
ဆိုက်ဘေးရီးယားနှင့် Alaskan Husky vs Malamute: ခြားနားချက်ကဘာလဲ။
ဒီပိုးဟပ် - မင်းအတွက်သင့်တော်တဲ့ခွေးလား။
shih tzu နှင့် poodle ရောမွှေပါ
bull mastiff ကိုဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်ရောသည်